Shiinaha harimitsu squid jig warshad iyo soosaarayaasha | Harada Wabiga
harimitsu squid jig
1.Waxaan nahay soo -saare soo -jiidasho u heellan, waxaan awoodnaa inaan soo saarno duufaanno adag, qaadooyin ,. Is -habeynta waa la taageeray, oo fadlan hubso in dhammaan macluumaadka alaabtaadu ay si fiican u ilaalinayaan oo aan la shaacin doonin.
2. Waxaan leenahay kooxahayada R&D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta.
3. Shaqaalaha adeegga ganacsiga shisheeye ee xirfadda leh ee shirkaddeennu waxay si fudud u dabooli karaan baahiyahaaga soo iibsiga, waxaanan rumaysanahay in macmiil kastaa yahay iibsade wanaagsan oo aannu ixtiraamno.
4. Waxaan ballan qaadaynaa inaan 24 saac gudahood wax kaga qaban doonno la -tashigaaga iyo dhammaan su'aalahaaga
Qiimaha FOB: US $ 0.35 ~ 0.75 / kumbiyuutarada
Xidhmada: Xidhmada OEM
Kordhinta: Astaanta la habeeyay, baakadaha
Awoodda Bixinta: 10000 sanduuq toddobaadkii
Kalluunka laftiisu ma laha iftiin, ee waa wax milicsanaya, wuxuu ka tarjumayaa biyaha hoostiisa, dheecaanka ku jira kalluunka wuxuu u eg yahay caloosha kalluunka.
10 mitir oo biyo ah, waxay si gaar ah u soo jiidan kartaa tuubada wax lagu dhufto
Geedi -socodka wax -soo -saarka
Dhammaan moodooyinka cusub waxaa lagu soo saaraa qeybtayada soo koraya oo leh nidaamyada “CAD” ee kombiyuutarka.
2. Samaynta caaryada tusaalaha ah
Mashiinka goynta ayaa si otomaatig ah uga gooya caaryada xogta CAD.
3.Potyotype iyo imtixaan
Samaynta Prototype -ka oo hubi waxyaabo badan: kartida kabka, ficilka hadda jira, ficilka, ka dib, waxaan isku daynaa kalluumaysiga oo soo qabanno kalluunka qaar.
4.Sameynta caaryada birta
Samaynta caaryada birta iyada oo loo marayo mashiinka goynta biraha otomaatiga ah oo leh farsamo casri ah.
5.Ka samee meydad caag ah iyo isu -imaatin
Sameynta meydad caag ah.Kaddib waxaan isticmaalnaa mashiinnada alxanka oo adeegsada teknolojiyadda mowjadda sare si aan ugu biirno meydadka.
6.Rinjiga iyo Kormeerka
Farshaxan -yahannadu waxay si ballaadhan gacanta ugu rinjiyeystaan ​​mid walba soo jiidashada. Kadibna waxaan ku dhejinnaa siddooyinkii kala go'ay, qabsatooyinkii iyo indhihii.
Dalian River Lake Kalluumaysiga Qabashada Co., LTD
Dalian River Lake Kalluumaysiga Wax ka Qabashada Co., Ltd. waa shirkad isku dhafan R&D, naqshadeyn, wax soo saar iyo iibin. Waxaan leenahay ku dhawaad ​​10 sano oo waayo -aragnimo guul leh oo ku saabsan ganacsiga internetka.Waxyaabahayagu si fiican bay u iibiyaan Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, Australia, Koonfur -bari Aasiya iyo dalal iyo gobollo kale.
Hadda, alaabooyinkayaga ugu waaweyn waxaa ka mid ah: soo jiidashada caagga ah, sed birta ah, sedka lafdhabarta, haley dabool, ulaha dhalaalaya kalluumaysiga iyo kuwa kale..Qalabka wax -soo -saarka oo horumarsan, r & D kooxda, si annaga oo ah warshadaha qiimaha iyo wax -soo -saarka labadaba aad u tartanno.
Soo -saare Xirfadle ah
Kobcinta badeecada cusub waa hawl muhiim noo ah. Iyadoo aan loo eegin naqshadda iyo midabka caadada ah, waan soo saari karnaa ilaa aad ka qanacdo. Bixi adeegga OEM
Anagoo bixinayna tayo badeecadeed oo ka sii wanaagsan, waxaan weli ku haynaa qiimaha heer u tartamaya iibsadayaasha, si ay fursado iyo macaash badan ugu helaan suuqa.
Xakamaynta Tayada Iyo Shahaadooyinka
Kooxdayada xakamaynta tayada qaangaarka ah ayaa baari doonta alaabta ka hor inta aan la soo dirin, oo ay ku jirto hubinta huurka, cilladaha, khaladaadka, baakadaha, iwm. Shahaadooyinka ISO, SGS, CE, RTS, iwm.
Baakadaha:Xidhmada Dhoofinta Heerka, ama sida waafaqsan shuruudaha macaamilka.
Bixinta: TT /Paypal /Hubinta Ganacsiga iyo wixii la mid ah
Habka Bixinta: Badda ama Hawada iyada oo loo marayo UPS/ DHL/ TNT/ FEDEX iyo wixii la mid ah
Hore: Yamashita squid jig jumlada
Xiga: Sumizoku squid jig
1. Ma heli karaa qiimaha alaabtaada?
Soo dhawoow. Pls waxaad xor u tahay inaad email noogu soo dirto halkan. Waxaad heli doontaa jawaabtayada 24 saac gudahood
2. Ma ku daabici karnaa astaantayada/mareegaha/magaca shirkadda badeecadaha?
Haa, fadlan kala talin cabirka iyo Xeerka Pantone ee sumadda.
3. Waa maxay waqtiga hogaaminta ee dalabka joogtada ah?
7-10 maalmood dalabka tirada ka hooseeya 1000pc; Tiro badan, badanaa 20 maalmood
4. Ma heli karaa qiimo -dhimis?
Haa, qiimaha dalabka hal ka badan $ 1000, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho qiimaha ugu fiican.
5. Miyaad baadhaa alaabta la dhammeeyey?
Haa, talaabo kasta oo wax -soo -saarka iyo alaabada la dhammeeyay waxaa soo bixi doona kormeerka waaxda QC kahor dhoofinta.
Squid Jig ugu Fiican Habeenkii
jigjiga squel duel
Squid Squid Jig
squid jig soo jiidasho
BOOQAHA MACMIILKA Wararka
Yamashita squid jig iibka
OEM japanese squid jig